Factory an'ny famokarana lasantsy oxygen Generator | Zavamaniry oksizenina hazavana ambany sy ambany - Hangzhou OuRui Air Separation Equipment Co., Ltd.
MIarahaba anao SA
Hangzhou OuRui Air Separation Equipment Co., Ltd. dia miorina eo amoron'ny renirano Fuchun tsara tarehy, tanànan'ny Sun Quan, ny Emperoran'ny The East Wu, izay eo an-tsisin'ny Faritra Hangzhou Tonglu Jiangnan Vaovao, eo anelanelan'ny Farihin'i Hangzhou Andrefana sy ny sehatry ny firenena toerana Qiandao Lake, Yaolin Fairyland, Hangzhou New Expressway Fengchuan fivoahana dia 1,5 kilometatra monja miala ny orinasa, tena mety ny fifamoivoizana.
Hangzhou OuRui Air Separation Equipment Co., Ltd. dia mpanamboatra matihanina fisarahana amin'ny kriogenika, fitaovana famokarana oksizenina VPSA, fitaovana fanadiovana ny rivotra, famokarana azotazy PSA, fitaovana famokarana oksizena, fitaovana fanadiovana azotazy, famokarana azota manasaraka manasaraka ary fitaovana famokarana oksizenina, herinaratra. Valizy fanaraha-maso pneumatika. Valizy fanaraha-maso ny mari-pana. Tapaho ny orinasa mpamokatra valizy. Manana orinasa mihoatra ny 14000 metatra toradroa ny atrikasa manara-penitra maoderina ny orinasa ary manaraka hatrany ny filozofian'ny orinasa "fahamarinana, fiaraha-miasa, fandresena", ny fampandrosoana ny siansa sy ny haitao. , lalana lehibe, mankany amin'ny indostrian'ny fampandrosoana teknolojia avo lenta sy vaovao, ny orinasa dia nandalo ny fanamarinana ny rafitra kalitao ISO9001, ary nahazo ny "fifanarahana sy mitazona ny fampanantenana", ny orinasa dia voatanisa ho iray amin'ireo indostrian'ny haitao avo sy vaovao any zhejiang faritany orinasa lehibe ny fanavaozana ny siansa sy ny teknolojia.
Mari-barotra voasoratra anarana
Ny vokatra avy amin'ilay orinasa dia mandray ny "OR" ho marika famantarana voasoratra anarana.
Ny orinasa dia manana atrikasa maoderina maherin'ny 14000 metatra toradroa.
Ny orinasa dia nandalo ny fanamarinana rafitra kalitao ISO9001.
Ho an'ny kalitaon'ny fahavelomana, ny tsena, ny siansa ary ny teknolojia ho an'ny fampandrosoana, ny fitantanana hamoronana fahombiazana, serivisy hahazoana fitokisana.
Ny vokatra avy amin'ny orinasa dia mandray rivotra voafehy ho toy ny akora, amin'ny alàlan'ny fizotran'ny mandeha ho azy, fanadiovana ny rivotra voafintina, fisarahana, fitrandrahana. Ny orinasa dia manana enina andiam-pitaovana fanadiovan-drivotra voafintina, PSA PSA PSA fitaovana fisarahana amin'ny rivotra, fitaovana fanadiovana azotazy sy ôksizenina, rivotra fisarahana manify. fitaovana fisarahana, fitaovana famokarana oksizenina VPSA, fitaovana fisarahana rivotra cryogenika ary valves mandeha ho azy, miaraka amin'ny maodely 800 sy maodely.
Ny vokatr'ilay orinasa dia mandray ny "OR" ho marika famantarana voasoratra, be mpampiasa amin'ny arintany metaly, elektronika herinaratra, petrochemical, fanafody biolojika, fingotra kodiarana, lamba lamba sy fibre simika, fitehirizana sakafo ary indostria hafa, ny vokatra amina tetikasam-pirenena lehibe dia mitana andraikitra.
MIASA ny orinasa
Ny filàn'ny mpampiasa ho teboka manintona, ny fampandrosoana sosialy ho tanjona, ary ny fahafaham-pon'ny mpampiasa ho fenitra
TENET NY ORINASA NO
"Ho an'ny kalitaon'ny fahavelomana, ny tsena, ny siansa ary ny teknolojia ho an'ny fampandrosoana, ny fitantanana hamorona fahombiazana, ny serivisy hahazoana fitokisana." Miezaha hanaraka fenitra iraisam-pirenena amin'ny kalitao, serivisy, fitantanana, teknolojia ary lafiny hafa. Miaraka amin'ny vokatra "NA" , mamorona fahombiazan'ny mpampiasa, manangona harena ho an'ny fiarahamonina, ary miara-mamorona rahampitso tsaratsara kokoa.